Inka Badan 10 Askari Oo Lagu Dilay Magaalada Qunduuz. – Bogga Calamada.com
Inka Badan 10 Askari Oo Lagu Dilay Magaalada Qunduuz.
12 Askari oo Afghaniyiin ah ayaa dhintay kadib markii xilli ay hurdeen ay rasaas ku fureen laba Askari oo Ciidamada Booliiska ka tirsanaa, kuwaas oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la lahayeen Mujaahidiinta Daalibaan, waxaana shilkani uu ka dhacay meel ku dhow magaalada Qunduuz ee Waqooyiga dalka Afghanistan.
Askarta la laayay waxay ku sugnaayeen Talis Meliteri oo kuyaalla magaalada Qunduuz, halkaas oo Sannad ka hor ay la wareegeen Mujaahidiinta Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ka hor inta aysan ka bixin markii ay duullaan xooggan ay kusoo qaadeen Maleeshiyaadka Xukuumadda daba dhilifka ee Kaabuul oo taageero ka helaya diyaaradaha dagaalka ee Isbaheysiga Gaalada Nato.
Weerarrada ay geystaan rag ka tirsan Mujaahidiinta Daalibaan ee ku dhex jira sufuuta Maleeshiyaadka daba dhilifyada ah ayaa waxay sii xoogeysteen dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, iyadoona weerarradaasi ay galaafteen nolasha toboneeyo ka tirsan Ciidamada Xukuumadda Kaabuul iyo Askar ka tirsan Isbaheysiga Saliibiga ee duullaanka ku jooga Dalka Afghanistan.
Dhinaca kalena Mujaahidiinta Daalibaan ayaa dhulka soo dhigay diyaarad nooca helicopterska oo ay lahaayeen Ciidamada Gaalada Nato, waxaana diyaaraddani lagu soo diray degmada Shiinkoot ee Gobolka Goor ee galbeedka dalka Afghaistan.
Diyaaraddan waxaa lasoo riday xilli ay duqeyneysay goobaha ay ku sugan yihiin Ciidamada Mujaahidiinta ee gobolka Goor, iyadoona markii la beegsaday ay isku dayday inay si deg deg ah u caga dhigato Saldhig Meliteri oo deegaankaas ka agdhawaa, hase yeeshee waxay bur burtay ka hor inta aysan saldhigga gaarin, waxaana ku dhintay gebi ahaanba duuliye-yaashii iyo Askartii la socday diyaaraddaasi.
Mujaahidiinta Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa horraantii Sannadkan waxay ku dhawaaqeen Xamlo dagaaleed ay ugu magac dareen Al-Cumariyah, waxayna qaadeen howl-gallo waaweyn oo ay kula wareegeen dhul ballaaran oo kuyaalla bariga iyo Koonfurta dalka Afghanistan.